Le yiProjekthi Nimbus, umhleli womfanekiso weAdobe wexesha elizayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Emva kwe Inkomfa yonyaka ebizwa ngokuba yi-MAX eSan Diego kwaye yenziwa yiAdobe, le nkampani ithathe isigqibo sokuthatha ithuba lokunika usetyenziso lwayo imisebenzi emitsha, ngokunjalo bonisa izicelo ezintsha phantsi kwento ebizwa ngokuba yiProjekthi yeNimbus.
Kwaye kubonakala ngathi ngasemva kwale ikhowudi entsha ehlekisayo Kuyenzeka ukuba ufumane inkqubo entsha yokuhlela umfanekiso ngenkxaso yeenkonzo zelifu. Le ine Ukuhlaziywa kwesitayile seLightroom, kodwa ngemodeli elula kunye nentetho. Yimodeli elula, kodwa inenkangeleko ebonakala ngakumbi, ebonisa ubunzima kunye nezinto ezintsha.
1 Yintoni iProjekthi yeNimbus?
2 Uyilo lwamava
Yintoni iProjekthi yeNimbus?
Into ebizwa ngokuba yiProjekthi yeNimbus iyasivumela, kwiminqweno yexesha elizayo yabayili bale projekthi, sebenza ngokufanayo nezinye izicelo, kunye nokuhambelana nezinye iinkqubo zedesktop kunye neeapps ezihambayo.
Ngokukwanjalo, kunokwenzeka ukuba uqaphele ukuba ngoku ababhali bale projekthi bahlala begxile kwiinkonzo ze-iCloud, ezibavumelayo wenze olona lwazi lufunyenweyo ngasemva kwawo wonke umsebenzi omisela ukusetyenziswa kweAdobe, ethe yafumana impumelelo enkulu kwizicelo zeefowuni eziphathwayo.
I ngoku abahleli abatsha Baza kusivumela ukuba sijonge imifanekiso kunye nezixhobo ngeLifu lokuDala, ukuze sibe nakho ukugcina zonke izinto eziyimfuneko zomsebenzi owenziweyo ngezi zicelo. Ngokukwanjalo, ikwafuna ukuba nezipele ezizenzekelayo nganye yezixhobo ezikhutshiweyo ngelinye ixesha kweli lifu.
Enye inqaku elinomdla ngalo Iprojekthi yeNimbus Kukusetyenziswa kwetekhnoloji entsha yokufunda ngomatshini yeAdobe, ekunokuthi ngayo kusetyenziswe ulwimi ukukhangela ifoto yealbham ethile, ngaphandle kokuyimakisha ngaphambili. Ngale ndlela, kukho iinkampani ezininzi ezisayinela le nkqubo intsha, ukuba ngabanini bezinto ezintsha ezingena kubuchwephesha.
Ukongeza kwi Iprojekthi yeNimbusKuyenzeka ukuba uqaphele ukuba kukho ezinye izicelo ezinobuchule eziza kwenza ukusetyenziswa kwetekhnoloji yedijithali into esebenzayo ngakumbi kwisakhelo seeprojekthi. Phakathi kwezinye izicelo, sinokukhankanya Uyilo lwamava y Iprojekthi yefeliksi.
Le yile isicelo sigxile kuyilo lwegraphic, ekuvumela ukuba wenze iimodeli kubukhulu be-3D, kunye nemeko ze-2D okanye nakweyiphi na imeko, Izinto ze3D esekwe kwiimeko ze-2D, ebonisa izakhiwo ezintsonkothileyo ezinenyani ebalulekileyo. Nokuba namava Uyilo anokufumaneka kwiBeta.
Esi sixhobo siyasivumela prototype, yabelana kunye namava oyilo yomsebenzisi kwinqanaba ledesktop kunye nakwiselfowuni.
Iprojekthi yeNimbus ibonisa ulindelo oluphezulu kubasebenzisi bayo, ivumela ukuba benze okungakumbi ngokuncinci. bucala ngasekhohlo umhleli womfanekiso omtsha iyakungena kwimarike phantsi kweenqobo zokugweba, eziye zadityaniswa phakathi kwexesha lokuyilwa kwegraphic, zenza le nkqubo enye yezona zihambele phambili kwaye zifanelekile ukujongana neemfuno ezivela ngaphakathi kubume bokuyilwa kwegraphic.
Eli linqanaba elitsha, imveliso ethembisa okuninzi, ngokunjalo ukuvela kwexesha loyilo ngeenkqubo ezinokunikezela ngazo kubo bonke abasebenzisi babo. Ngale ndlela, iProjekthi yeNimbus mhlawumbi linyathelo eliya kwisizukulwana esitsha seeprojekthi ezintsha, ezenza ukuba nganye ibe zezona zihambele phambili ngalo mzuzu. Ngesi sizathu, le nkqubo iseke uthotho lwezikhokelo ekufuneka zithathelwe ingqalelo ekusebenzeni kwayo kunye nokusetyenziswa kuyo yonke inkqubo-sikhokelo yexesha lokuvavanywa kwayo kuluntu loyilo, ukuyenza kuvavanyo lwe-litmus lwale nkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Le projekthi iNimbus, umhleli womfanekiso wexesha elizayo ovela kwiAdobe
I-Arch Naphi na ikuvumela ukuba ufake iArch Linux kanzima kwaye ngokukhawuleza ngaphandle kokuphambana kwinkqubo
Yile ndlela iPaint iguquke ngayo kwimbali yeWindows